Toriteny Alahady 28 Jolay 2013 | FJKM Amboniloha
Toriteny Alahady 28 Jolay 2013
Eksodosy 23: 20-25 / Jaona 6: 25-33 / Romana 15: 25-33
“Inona no ataonay iasanay ny asan’Andriamanitra, izao no asany dia ny inoanareo izay nirahiny”.
Tantara nanaovan’I Jesoa Kristy fahagagana ka namokisany ny mpianatra, nahatonga ny mpianatra nanaiky ny Hery sy ny Fahefana nananan’i Jesoa, ka nananarany ny mpianatra hoe aza miasa mba hahazo ny hanina mety ho levona fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay.
Inona ary no asa atao ?
1- Minoa izay nirahiny
Maro amintsika Kristiana no mihevitra fa ny fikelezan’aina amin’ny fanaovana ny asan’Andriamanitra any am-piangonana sy ny sehatra maro samihafa dia ampy ahatondra antsika handova ilay fiainana mandrakizay. Mampianatra antsika ny tenin’Andriamanitra fa na dia efa nanao asa marobe tamin’ny anaran’i Jesoa Kristy aza isika ; tsy izay no asa takina amintsika ahazoana ilay hanina maharitra mandrakizay fa ny finoana an’i Jesoa Kristy, mialoha ny handraisantsika fanapahan-kevitra hanolo –tena ho amin’ny asa fampandrosoana maro samihafa eo anivon’ny Fiangonanana dia manontany anao ny Tompo, efa nanaiky sy nandray an’ i Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy ny fiainako ve aho ? raha izay no tanteraka dia eto an-tany isika dia efa misantatra sahady ilay hanina maharitra mandrakizay dia ilay fiadanana sy fitahiana avy amin’Andriamanitra araka izay voatanisa ao amin’ny Bokin’i Eks 23 : 20-30
2- Mila manatanteraka ny asan’Andriamanitra tokoa isika
Teny fototra ny amin’ny asan’Andriamanitra dia ny hoe « asa soa » ; izany hoe ny hampandroso ny fanjakan’Andriamanitra ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Takiana amintsika ny fanahin’ny fanompoana , tsy amintsika samy Kristiana ihany fa indrindra ireo izay mbola miaina ao anatin’ny fahamaizinana dia ny Jentilisa araka ny hita ao amin’ny Rom 15
Takian’ny Tompo amintsika Kristiana ny hijery ny manodidina antsika , fantaro izay banga eo amin’ny fiainany , fa matoa izaho sy ianao nataon’Andriamanitra ho eo akaikin’izy ireny dia ao amintsika no mameno ny banga , ampaherezo izy, ampio izy ; ary atao amin’ny fahatsoram-po, fa tsy amin’ny fandatsana. Tsarovy fa arakaraky ny anolorantsika, no andraisantsika valiny betsaka ao amin’Andriamanitra.
Koa samia ary manantanteraka ny adidy sy andraikitra nomen’Andriamanitra antsika avy isika rehetra. Hiasa tsara ny asan’Andriamanitra ; ka ny fananantsika an’i Jesoa Kristy ho tompon’ny fiainantsika no hery manosika antsika hanao ny asa soa rehetra ho fanompoana an’Andriamanitra.
Ho Azy Andriamanitra irery ihany ny voninahitra . Amen !
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 28 juillet 2013